भ्रमण वर्ष २०२० को पहिलो महिनामै घट्यो नेपाल घुम्ने पर्यटकको सङ्ख्या - Shikhar Post Shikhar Post
आईतवार, ११ आश्विन २०७७
भ्रमण वर्ष २०२० को पहिलो महिनामै घट्यो नेपाल घुम्ने पर्यटकको सङ्ख्या
काठमाडौं । वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्षको पहिलो महिना (जनवरी)मै नेपाल आउने पर्यटक घटेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार जनवरी २०२० मा कूल ७९ हजार ६ सय ८६ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।
जबकी, सन् २०१९ को पहिलो महिना जनवरीमा करिब ९२ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको तथ्याङ्क छ । यो संख्या हवाई र स्थल दुवै मार्गबाट आएका पर्यटकको हो ।
बोर्डका अनुसार २०२० जनवरीमा चिनियाँ पर्यटकको आगमन केही घटेको छ । तर, भारतीय पर्यटकको संख्या भने बढेको छ । यसका वावजुत समग्र पर्यटक आगमन भने ओरालो लागेको हो ।
तथ्यांक अनुसार जनवरी २०२० मा भारतबाट १६ हजार ८ सय ८२ पर्यटक नेपाल आएका छन् । सन् २०१९ मा भारतबाट १४ हजार ६ सय ५० पर्यटक आएका थिए । चीनबाट सन् २०१९ मा १३ हजार ६ सय ८८ पर्यटक आएकोमा सन् २०२० मा भने १३ हजार ३ सय ३ जना पर्यटक आएका छन् ।
यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३८५ ले कम हो । अमेरिकाबाट आउने पर्यटकको संख्या ओरालो लागेको छ । अमेरिकाबाट सन् २०१९ जनवरीमा ७०२८ जना पर्यटक आएकोमा सन् २०२० जनवरीमा ६३८६ पर्यटक आएका छन् ।
डिसेम्बर २०१९ देखि शुरु भएको कोरोना भाइरसले चीनतर्फको पर्यटन बजार खस्किदा यसले भ्रमण वर्षलाई भने नराम्रोसँग प्रभाव पर्ने देखिएको छ । किनकी चिनियाँ नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा जनवरी र फेब्रुअरीमा चिनियाँहरु ठूलो संख्यामा भ्रमणमा निस्कने समय हो ।
प्रकाशित मिति : सोमबार, २७ माघ २०७६ १६:२२
हिमाल आरोहणका लागि बहराइनका राजकुमारको टोली खुम्बुमा
सोलुखुम्बु । लोबुचे र मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि नेपाल आएको बहराइनका १५ र तीन बेलायती नागरिकको टोली खुम्बुमा छन् । यो टोलीमा बहराइनका राजकुमार मोहम्मद हमद मोहम्मद अल खालिफा समेत
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न हप्तामा दुई दिन विदा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न हप्तामा दुई दिन विदा दिने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने भएको छ। मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा आज बसेको
सोलु खोला जलविद्युतले ६ महिनामा २२ करोड आम्दानी गुमायो, ५० करोड ब्याज भार थपियो
उर्जाखबर/काठमाडौं । प्रसारण लाइन समस्या झेलिरहेको सोलु खोला जलविद्युत आयोजनाले ६ महिनामा २२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ । साढे २३ मेगावाटको आयोजनाको १७ मेगावाट विद्युत खेर जाँदा यति धेरै
चीनमै देखियाे अर्काे नयाँ संक्रमण, सयौं मानिस बिरामी !
चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबाट विश्व आतंकित भइरहेको बेला चीनमै फेरि अर्को नयाँ संक्रमण देखापरेको छ। चीनको उत्तर पश्चिमी इलाकास्थित गान्सु प्रान्तको लानजोउ सहरमा एक नयाँ संक्रमणबाट सयौं मानिस बिरामी
कोरोना भाइरस संक्रमितमा देखिन सक्ने ११ लक्षण ! के खाने, के नखाने?
काठमाडौं । कोभिड-१९ संक्रमित बिरामीहरुलाई स्वस्थ, पोषिलो र सन्तुलित खानाको आवश्यकता हुन्छ। कोभिड-१९ संक्रमितलाई अन्य दीर्घ रोग भए नभएको एकिन गरि आवश्यक पोषण व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। मधुमेह, उच्च रक्तचापजस्ता जीवनशैलीसँग
सहकारी संस्थाहरुले साधारणसभा फेसबुकबाट लाइभ गर्नुपर्ने विभागको सुझाव
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले साधारणसभा गर्दा सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गर्नुपर्ने भएको छ । सहकारी विभागले सहकारी संस्थालाई साधारणसभा गर्दा सामाजिक सञ्जाल वा स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न सुझाव
गौतमद्वारा राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ ग्रहण
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित वामदेव गौतमले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष गौतमलाई बिहीबार राष्ट्रियसभा सदस्य
पर्यटन उद्योग पुनरुत्थानका लागि बोर्डद्वारा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन
काठमाडौंः कोभिड १९ (कोरोना) भाईरसको महामारीका कारण थलिएको पर्यटन उद्योग पुनरुत्थानका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । ‘टुरिज्म रिभाइभल टास्कफोर्स’ नाम दिइएको कार्यदलमा प्यासिफिक एसिया
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा रोनाल्डोको १०० गोल पूरा
काठमाडौं, २४ भदौ । पोर्चुगलका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा १०० गोल पूरा गरेका छन् । उनी आफ्नो देशका लागि १०० गोल गर्ने पहिलो युरोपेली खेलाडी भएका छन् ।
भेनेजुएलामा सेप्टेम्बर महिनाभित्रै रुसी खोप परीक्षण
रासस/एएनआई । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोले कोरोनाभाइरस विरुद्ध रुसले तयार पारेको ‘स्पुतनिक भी’ खोप क्लिनिकल परीक्षणका लागि यसै सेप्टेम्बर महिनाभित्र भेनेजुएला आइपुग्ने बताएका छन् । भेनेजुएलाको टेलिभिजनबाट सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति
माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाका २१ जनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बु जिल्लाको माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाका २१ जनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट यात्रा गरेको आधारमा २१ जनाको स्वाब संकलन गरी पीसीआर टेष्ट गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट
कोरोना कहरको बीचमा सरकारले तोक्यो कर तिर्ने समयसीमा, निजी क्षेत्र समस्यामा
काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्न भदौ २५ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ । कर तिर्न व्यवसायीलाई सहज बनाइदिन निषेधाज्ञाको समयमा सेवा बन्द गरेका बैं‌कका शाखा खोल्न निर्देशन सरकारले
सोलुखुम्बु । लोबुचे र मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि नेपाल आएको बहराइनका १५ र तीन बेलायती
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न हप्तामा दुई दिन विदा दिने
प्रदेशले ‘फूल पावर एक्सरसाइज’ गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ: १ नम्बर प्रदेश मुख्यमन्त्री शेरधन राई
पहिलोपटक संघीय शासनमा छौं, प्रदेश सरकार सञ्चालनको कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? हो हामी नेपालको